Amaanka Hong Kong oo aad loo adkeeyay - BBC Somali
Amaanka Hong Kong oo aad loo adkeeyay
Image caption Booliiska ayaa si aad ah ammaanka u adkeeyay
Nabad galyada ayaa aad loo adkeeyay jasiiradda Hong Kong oo uu booqasho ku tagay sarkaal sare oo ka soo kicitimay Beijing, waana booqashadii u horraysay ee sarkaal darajadaa leh uu ku tago tan iyo intii ay dhaceen dibad baxyadii lagu doonyay dimuqraadiyadda ee 2014 kii.
Zhang Dejiang waa sarkaalka u qaabilsan dowladda Shiinaha arrimaha gobolka Hong Kong, booqashadiisuna waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dadka jasiiraddu aad uga biyo diidsanyihiin faro galinta Beijin ee maamul hoosaadka jasiiraddan.
Zhang wuxu sheegay inuu Hong Kong u yimid inuu “ogaado aragtida dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada”.
In ka badan 6000 oo askar bilays ah ayaa la howl galiyay si looga hor tago dibad baxyo laga baqe qabo inay dhigaan kooxaha dimurqaadiyadda u ololeeyaa.
Mr Zhang waa gudoomiyaha guddida dhexee golaha shacabka Shiinaha, taas macnaheeduna waa inuu yahay ninka saddexaad ee ugu sareeya dalka, waxaanu khudbad ka jeedin doonaa shir dhaqaalaha lagaga hadlayo inta uu ku guda jiro booqashadiisa saddexda maalmood ah. Waxa kale oo uu kulamo la yeelan doonaa xildhibaannada dimuqraadiyadda u ololeeya.